Home Wararka Farmaajo oo dhidibada sii aastay iyo mucaraadkii oo ku soo dhamaaday dacaayad,...
Farmaajo oo dhidibada sii aastay iyo mucaraadkii oo ku soo dhamaaday dacaayad, cataab!
Dhoolatuskii Farmaajo sameeyay maalinta calanka ee ku beegnayd 12ka bishaan waxa ay fartiin cad u dirtay mucaaradkii afartii sano ee la soo dhaafay dagaalka kula jiray Farmaajo iyo dowladiisa. Fartiintiisa ayaa ahyd; dalka aniga ayaa madaxweyne ka ah, taladiisa iska leh, cid wax iga qaadi kartaana ma jirto!.
Sideed bilood ka hor ayaa ay ahayd (8da Feberaayo) markii mucaaradku tirinayeen waqtigii ka haray hogaanka Farmaajo. Hadalka mucaaradka ayaa ahaa; dhowr maalin baa u hartay; saacado ayaa u hartay, habeenii waqtigiisa dhamaad 7da Feberaayo) , xabado ayaa hawada lagu huwiyay iyada oo loo dabaaldagayo in Farmaajo waqtigiisa dhamaaday.
Waxaa wax lala yaabo ah in ayan hada jirin mucarad ka hadlayo in Farmaajo waqtigiisa dhamaaday iyo sidii loo ceyrin lahaa? waxa uu hadalkoodii ku soo dhamaaday cataab, oohin iyo qoraal joogta oo ay soo saaran. Midowga Musharaxiinta ayaa u muuqda kuwo aqbalay joogitaanka Farmaajo iyada oo ayan jirin wax ay ka qaadi karaan oo aan ahayn tuugmo iyo cataab. Taas oo loo fasiran karo in Farmaajo ku adkaaday awooda siyaasada dalka
Dhanka kale Farmaajo oo og awooda iyo kala qeybsanaanta mucaraadka, gaar ahaan isbahaysiga Midowga Musharxaiinta ayaa u dhaqamaya sidii madaxweyne hada la soo doortay iyada oo ayan wax isbadal ku imaanin awoodiisa. Waxaa muuqata in ayan dalka Soomaaliya ayan ka dhaci doonin doorasho xili dhaw, gaar ahaan doorasho ka madaxbanaan saameynta Farmaajo iyo saaxiibadiisa.